10 युरोपमा यात्रा गर्नु गलत हो | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा यात्रा गर्नु गलत हो
यदि तपाईं युरोपको पहिलो यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईलाई सबैभन्दा बढि जान्नु आवश्यक छ सुन्दर शहर संसारमा. हामीले यसका लागि उत्तम गाईड डिजाइन गरेका छौं 10 यात्रा गल्तीहरू तपाईंले युरोपमा टाढा रहनु पर्छ. महलहरूको भूमिमा यात्रा, अति उत्तम खाना, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, र रमणीय गाउँहरु, तपाईंसँग भएको सबैभन्दा अविस्मरणीय बिदा हुन सक्छ. यसको विपरितमा, यो पनि एक दुष्ट कथा मा परिणत हुन सक्छ र एक खराब अन्त हुन सक्छ, यदि तपाईं राम्रोसँग तयार हुनुहुन्न भने.
चाहे तपाईं पहिलो पटक युरोप यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा फिर्ता आउँदैछ, यी सुझावहरूले तपाईंको यात्रा सुरक्षित गर्दछ, धेरै सहज, र निश्चित रूपमा महाकाव्य.
1. सानो शहरहरू र अफ-द पिट्ने-ट्र्याक स्थानहरूको भ्रमण गरिरहेको छैन
यदि यो युरोपको तपाईंको पहिलो यात्रा हो, त्यसो भए तपाई निश्चित ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्छ जहाँ सबैले कुरा गर्दैछन्. तथापि, यदि तपाइँ विशेष युरोप पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए साना गाउँहरू र ज्ञात शहरहरू भ्रमण नगर्दा यात्रा गल्तीहरू मध्ये एक हो युरोपमा जोगिन. तपाईंले यात्राको योजना यूरोपमा पिटेको पथ स्थानहरू भन्दा अविस्मरणीयको लागि बनाउनु पर्छ.
को पाठ्यक्रम, यदि तपाइँ पेरिसको सडकमा अन्य लाखौं पर्यटकहरू भीड जस्ता चित्रहरू हेर्न र उस्तै चित्रहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, मिलान, र प्राग, त्यसपछि भीडलाई पछ्याउनुहोस्. तर, यदि तपाईंसँग अन्वेषकको आत्मा छ भने, र खोज्दै ती लुकेका रत्नहरू, त्यसपछि तपाईंको यात्राको वरिपरि योजना बनाउनुहोस् युरोप मा साना र अद्वितीय गाउँहरु.
2. युरोपमा यात्रा गर्नु गलत हो: सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरीरहेको छैन
पहिलो कुरा जुन तपाईं सुन्नुहुन्छ दिमागमा आउँछ सार्वजनिक यातायात, भीड र तातो बसहरू छन्, लामहरु, र ट्राफिक. तथापि, युरोपमा सार्वजनिक यातायात केवल बस मात्र ट्राम र रेलहरू मात्र हुन्. केही पर्यटकले बरु कार भाडामा लिन्छन्, कम्युट भन्दा, तर युरोपमा सार्वजनिक यातायात धेरै सहज छ, समयनिष्ठ, सस्तो, र सिफारिस गरिएको.
तपाईं सजीलै यूरोपको सबैभन्दा दुर्गम भागहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ, आश्चर्यजनक प्रकृति भण्डार, महल, र लुभावनी दृश्य, रेल बाट. रेल भन्दा अर्को युरोप यात्रा गर्न अरू कुनै राम्रो तरीका छैन, यो निरपेक्ष समय र पैसा बचतकर्ता हो.
म्यूनिखदेखि साल्जबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
भियनादेखि साल्जबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
ग्राज साल्जबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
लिन्जदेखि साल्जबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
3. यात्रा बीमा होईन
हो, युरोपेली शहर संसारमा सबैभन्दा विकसित र सुरक्षित शहरहरू मध्ये एक हो. तर, तपाईं अझै पनि मानव हुनुहुन्छ, र युरोपको राष्ट्रिय निकुञ्जमा चट्टानहरू ठाडो र निर्दयी छन्. जबकि तपाईं सबै भन्दा अनुभवी hiker र यात्री हुन सक्छ, तपाईं अझै पनि चिसो समात्न सक्नुहुन्छ, खुट्टाको घुमा, वा तपाईंको क्यामेरा चोरी भएको छ.
युरोपमा यात्रा बीमा स्वास्थ्य र अन्य यात्रा कारणहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ. यात्रा बीमा प्राप्त गर्दै युरोप मा एक आवश्यक छ, र तपाईंले यस्तो आवश्यकतामा बचत गर्नु हुँदैन. यात्रा बीमा नहुनु गल्ती हो तपाईंले युरोप यात्रा गर्नुपर्दा जोगिनु पर्छ किनभने यसले तपाईंलाई थोरै भाग्य खर्च गर्न सक्छ.
मार्सिलिसदेखि ल्योन ट्रेन मूल्यहरू
पेरिस देखि लियोन ट्रेन मूल्य
ल्योन पेरिस ट्रेन मूल्यहरु
लियोन बाट एभग्नन ट्रेन मूल्य
4. युरोपमा यात्रा गर्नु गलत हो: अग्रिम मा टिकट खरीद छैन
युरोप महँगो छ. जहाँसम्म तपाई धेरै सस्तो स्थानहरूमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, संग्रहालय र आकर्षण टिकट तपाईं एक सानो भाग्य खर्च लाग्नेछ. अग्रिम टिकट किन्न नहुनु युरोपमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो, हरेक वर्ष लाखौं पर्यटक युरोप भ्रमण गर्दछन्, तपाईंलाई ग्यारेन्टी दिन्छ.
त्यसैले, तपाईं युरोपको प्रतिष्ठित साइटहरूको लागि ठूलो सम्झौताहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, आकर्षण, र गतिविधिहरु, यदि तपाईं अनुसन्धान र अग्रिम बुक. कहिलेकाँही तपाई वास्तवमै ठूला सौदा पाउन सक्नुहुन्छ टिकट अनलाइन खरीद गर्दै, र यो तपाइँ तपाइँको यात्रा मा धेरै अनमोल समय बचाउँछ. साथै, यदि यो युरोपको तपाईंको पहिलो यात्रा हो, तपाईं लामो लामको लागि तयार हुनुपर्दछ. त्यसैले, यात्रा र आकर्षण टिकटहरू अनलाइन खरीद गर्दा तपाईंलाई वर्षाको पानीमा उभिएर बचाउनेछ, तातो गर्मी दिन, र तपाइँको लागि समय छोड्छ दृष्टिकोण र पिकनिक.
5. एयरपोर्टमा पैसा साटासाट गर्दै
विदेशमा यात्रा तनावपूर्ण हुन सक्छ, भाषा बोल्दैन वा शहर वरिपरि तपाईंको बाटो पत्ता लगाउँदैन. तपाईंको बजेट र विदेशी मुद्रा ह्यान्डल गर्न तनावपूर्ण हुन सक्छ. जबकि एयरपोर्टमा पैसा साट्ने धेरै सहज र भरपर्दो छ, यो एक यात्रा गल्ती हो युरोप मा वेवास्ता गर्न.
शुल्कहरू भुक्तानी र मुद्रा विनिमय तपाईं खर्च हुनेछ, यसैले तपाईको रिसर्च अनलाइनमा गर्नु राम्रो हुन्छविनिमय पोइन्टहरू. पनि, तपाईं जहिले पनि तपाईंको होटेलको रिसेप्शनमा सोध्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू सिफारिस गर्न खुशी हुनेछन् भरपर्दो पैसा पोइन्टहरू क्षेत्रमा. यो एयरपोर्टबाट यात्राको लागि पर्याप्त आदानप्रदान गर्न सिफारिस गरिन्छ, र पहिलो रकम कभर हुने रकम 1-2 तपाईंको यात्रा को दिन.
6. गलत छिमेकीमा बुकिंग सहमति
स्थान सिर्जना गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक हो उत्तम छुट्टी यूरोपमा. शहरको सर्वश्रेष्ठ भागमा तपाईको अनुसन्धान गरिरहेको छैन, छिमेक, वा गाउँमा बस्न, युरोपमा यात्रा गर्दा बेवास्ता गर्न गल्ती हो. तपाईंको आवासको ठाउँ छनौट गर्नु आवासको प्रकार छनौटको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ. सहरको गलत भागमा रहनको लागि तपाईलाई यात्राको समय लाग्न सक्छ, यातायात, मूल्य, र सुरक्षा.
7. युरोपमा यात्रा गर्नु गलत हो: तपाईंले देख्नुहुने पहिलो रेस्टुरेन्टमा खाना
यदि तपाइँ एक विशिष्ट पर्यटक हो, त्यसोभए तपाईं खाजा को लागि लोकप्रिय फास्ट फूड चेनहरूको लागि जानुहुन्छ वा तपाईंको बाटोमा पहिलो रेस्टुरेन्ट. तथापि, तपाईं अचम्मको रेस्टुराँमा गुमाउन सक्नुहुन्छ, शानदार स्थानीय व्यंजन र दृश्य दृष्टिकोणको साथ जुन तपाईंको सास टाढा लैजानेछ.
यदि तपाईं आफ्नो यात्राको अगाडि अनुसन्धान गर्न मात्र केही समय समर्पित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एक अविस्मरणीय पाक अनुभव को लागी आफैलाई व्यवहार गर्नुहोस्. यसबाहेक, स्वादिष्ट खाना प्रयोग गर्दै, तपाईं केहि पैसा पनि बचत गर्न सक्नुहुनेछ, यसको सट्टामा पहिले रेस्टुरेन्टमा स्पिलगर्lको सट्टा. राम्रो कफी, पेस्ट्री, स्थानीय खाना, र हास्यास्पद दरहरूमा सनसनीखेज व्यंजनहरू, केवल कुनाको वरिपरि हुन सक्छ.
फ्लोरेन्स पिसा ट्रेन मूल्यहरु
रोमदेखि भेनिस ट्रेन मूल्यहरू
8. नि: शुल्क शहर हिड्ने टुरहरू भन्दा गाइडबुकमा टाँसिदै
एक गाइडबुक यूरोपको यात्राको लागि प्रेरणाको एक महान स्रोत हो, र एक सामान्य यात्रा को योजना को लागी. तथापि, तपाईको गाईडबुकमा टाँसिनु युरोपमा टाढा रहनको लागि सबैभन्दा ठूलो गल्ती गल्ती हो. यसको मतलव तपाई लाखौं अन्य पर्यटकहरु जस्तै उही ठाउँहरु मा जानुहुने छ, र एक पर्यटक जस्तै.
मा शहर पत्ता लगाउँदै नि: शुल्क पैदल यात्रा युरोपमा सब भन्दा उत्तम शहरहरूको मजा लिनको लागि उत्तम तरिका हो. एक स्थानीय बोल्ने अंग्रेजी गाईडले तपाईंलाई शहर वरिपरि लैजान्छ. लोकप्रिय र प्रसिद्ध साइटहरू देखाउँदै थप, शहर पैदल यात्रा टूर गाईडले तपाईंलाई शहरको सर्वोत्तम-गोप्य रहस्यहरू बताउँदछ र तपाईंलाई सिफारिसहरू र शहरका लागि सुझावहरूको भार दिन्छ. यो समावेश खाना सिफारिशहरू, महान सम्झौता, लुकेका ठाउँहरू, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ.
9. युरोपमा यात्रा गर्नु गलत हो: युरोपका लागि प्याकिंग छैन
सनी, वर्षाको, खोर्सानी, वा आर्द्र, युरोपको बारेमा सबै भन्दा खास चीजहरू यो हो कि तपाई सबैले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ4एक दिनमा मौसम. त्यसैले, विशेष गरी युरोपको मौसम को लागी प्याक नगर्नु भनेको कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्न एक गल्ती गल्ती हो.
टी-शर्टहरू, वर्षा र हावा ज्याकेट, आरामदायी जुत्ता तपाईको युरोपको यात्राको लागि प्याक गर्नको लागि सहज आवश्यक हुन्छ. प्याक गर्न र तह लगाउन उत्तम हुन्छ, यस तरिकाबाट तपाई कुनै पनि मौसममा सहज हुनुहुनेछ, र पूरै अलमारीको वरिपरि बोक्दैन.
म्युनिकदेखि ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरू
बर्लिनदेखि ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरू
ज्युरिख ट्रेन मूल्यहरूमा बासेल
भियना ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरु
10. तपाइँको नगद एक ठाउँमा राख्दै
युरोपेली शहरहरू आश्चर्यजनकको रूपमा चिनिन्छन्, तर पनि पिकपकेटिंग, पर्यटक जाल, र विभिन्न योजनाहरू पर्यटकहरूलाई छल गर्न. डाइभिंग बीचमा तपाईंको यात्रा बजेट तपाईंको दिन-यात्रा झोला, सुरक्षित, र क्रेडिट कार्ड सुरक्षित यात्रा र आनन्द लिनको लागि उत्तम तरिका हो.
सुरक्षित पक्षमा रहनु उत्तम हुन्छ र तपाईंको नगद र क्रेडिट कार्ड एक ठाउँमा राख्नु हुँदैन. त्यसैले, तपाइँको अनमोल सम्बन्धित तपाइँसँग सबै समय र ठाउँहरूमा, एक यात्रा गल्ती हो कि तपाइँ यूरोप मा टाढा रहनु पर्छ.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, युरोपमा पत्ता लगाउन धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्. तपाईं एक अद्भुत सप्ताहन्तमा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ वा लामो यूरो यात्राको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, सम्भावनाहरु अनन्त छन्. तर, जब तपाईं विदेशमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, खेलका नियमहरू शहर देखि शहरसम्म फरक हुन्छन्. केवल त्यहि चीज रहिरहन्छ जुन गल्तीहरू पर्यटकहरूले प्रत्येक एकल ट्रिपमा गर्छन्. हाम्रो 10 युरोप मा यात्रा गल्तीहरू जोगिन, तपाइँलाई सुरक्षित राख्नेछ र तपाइँको यात्रालाई अद्वितीय बनाउनेछ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईको छुट्टीको योजना यूरोपमा ट्रेनमा पठाउन सहयोग गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१० युरोपमा तपाइँले टाढा रहनुपर्दछ १० गलत यात्राहरू" तपाइँको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-mistakes-avoid-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, र तपाईं / pl लाई / tr वा / de मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ.
#traveleurope	यूरोपटाइप्स	रेल यात्रा	ट्रैवलमिस्टेक्स	traveltips
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप